गाउँमा थ्रीजी, सहरमा फोरजी
२८ पुष २०७३
काठमाडौं l मुलुकमा मोबाइलको प्रयोग बढेसँगै यसबाटै इन्टरनेट चलाउनको संख्या समेत उल्लेख्य बढेको छ । इन्टरनेटमा आम नेपालीको पहुँच बढाउन दूरसञ्चार कम्पनीहरूको भूमिका रहेको छ ।
यी कम्पनीहरू पनि प्रविधिको विकाससँगै सेवाग्राहीलाई नवीन प्रविधिमा सेवा बिस्तार गर्न तीब्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तीन वर्ष अघिसम्म सहरमा पनि राम्रोसँग नचल्ने थ्रीजी (थर्ड जेनेरेसन) सेवा अब गाउँसम्मै पुगिसकेको छ भने नयाँ वर्षसँगै सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले फोरजी चलाउन थालिसकेका छन् । यो खबर आजको कारोबारमा छ । नेपाल टेलिकमले हाल राजधानी काठमाडौं र पोरखामा फोरजी सेवा संचालनमा ल्याएको छ । सहरमा फोरजी सेवा सञ्चालन भइरहँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरू गाउँँमा भने थ्रीजी सेवा विस्तारमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । यसले गाउँदेखी सहरसम्म डेटा सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म कुल जनसंख्याको ५३.२९ प्रतिशतले डेटा सेवा प्रयोग गरेका छन् । १ करोड ४१ लाख २० हजार डेटा प्रयोगकर्तामध्ये अधिकांश प्रयोगकर्ता मोबाइलमा आधारित छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल मोबाइल सेवाको पहुँच बढेसँगै डेटा प्रयोग बढेको बताउँछन् । “सहरमा फोरजी संचालन हुँदा अहिले जिल्लामा थ्रीजी सेवाको व्यापक विस्तार भएको छ,” उनले भने, “सूचना प्रविधिको विकास सहरदेखी गाउँसम्मै भएको छ ।”
अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै राजधानीमा लङटर्म इभोलुसन (एलटीई) फोरजी सेवाको सुरुवात भएको छ भने यसलाई प्रविधिका क्षेत्रमा एउटा फड्को भन्ने गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा फोरजी सेवा विस्तारलाई पहिलो चरणमा विस्तार गर्ने कार्ययोजना अगाडी सारेको छ । अहिले कम्पनीले प्रस्तावित गाउँपालिकामा थ्रीजी सेवा विस्तारलाई जोड दिएको छ । कम्पनीले सहरमा फोरजी र गाउँमा थ्रीजी हुँदै समग्र देशमा ब्रोडव्याड इन्टरनेट पु¥याउने जनाएको छ । राजधानी लगायतका देशका १५ सहरमा पहिलो चरणमा फोरजी सेवा संचालन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । टेलिकमले संचालनमा ल्याएको फोरजी सेवामा ३२.४ एमवीपीएस पिक डेटारेट डाउनलोड गति छ । आईपी टेलिफोनी, गेमिङ सर्भिस, भिडियो कन्फरेन्सिङ, हाई डेफिनेसन मोवाइल टिभी तथा क्याउड कम्प्युटिङ फोरजी सेवाका मुख्य आर्कषण हुन ।
थ्रीजी सेवामा भने टेलिकम र एनसेलको तिब्र प्रतिस्पर्धा छ । एनसेलले टूजीमा आधारित भ्वाईस र डेटा सेवा देशैभरी पु¥याइसकेको छ । डेटा सेवा दुर्गम स्थानहरूमा पु¥याउन र आफ्नो थ्रीजी सेवा ७५ जिल्लामै पु¥याउन कम्पनीले डेटामा फोकस हँुदै काम गरिरहेको छ । अहिले कम्पनीले थ्रीजी सेवा विस्तारलाई जोड दिएको छ
भाइटीकाको साइत बिहान ११ः५१ बजे उत्तम, यसकारण बिहान ८ बजेअघि नलगाउन आह्वान
इराकी सेना र कूर्दिश फौजबीच भिडन्त
प्रधानमन्त्री भन्छन्- कम्युनिस्टहरु अधिनायकवाद लाद्न खोज्दैछन्
पार्टी एकता हुनेमा दुविधा पाल्नु पर्दैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
भारतमा सरकारी कार्यालय भवनको छाना अकस्मात् खस्दा ८ जनाको मृत्यु
यसरी बनाइँदैछ आइतबारबाट ठमेललाई ‘भेहिकल फ्री जोन’
तिहारको ‘भाइमसला’ स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी
विदेशमा रहेका नेपाली २४ सै घन्टा नेपालकै लागि खटिरहेका छन् : भवन भट्ट
पाल्पामा उत्पादित सिन्कामरी झिनियाँ रोटीको व्यापार बढ्यो
स्वास्थ्य बिमा ऐनः सर्वसाधारण कसरी हुन्छन् लाभान्वित ?
चुनावको सुनिश्चितताका लागि राप्रपा सरकारमा : उपप्रधानमन्त्री थापा
मतपत्रसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम अादेश दिन नपर्ने सर्वोच्चको निर्णय
२ महिनापछि संघीय र प्रादेशिक दुबै सरकार एमालेकोः केपी ओली
सरकारबाट नहट्ने माओवादीको निर्णय, ‘निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भयो’
७ ओटा पाराग्लाइड फेवातालमा यसरी खसे
गच्छदार कांग्रेसमा मिसिँदा जे देखियो, कसले–के भने ?
► Play 2821
► Play 1444
► Play 835
► Play 713
► Play 457